Tamberin'ny fahazaza... | Ny androaniko
[Ankapobeny ] 17 Oktobra, 2016 22:10
Mandrangotra kely ato aloha anio handatsaka ity horonantsary ity... toa atao hoe kopa-tànana avy amin'ikalamako nefa toa tsy dia tena izay loatra angamba fa andao atao hoe fanentanana ny mpisera hitsidika ny "Vlog"-n'i sefo Hery fa zany indray zao no malaza
"Serasera Telo Minitra" moa no anarana nomeny ity toraka vlaogy ity.. mitoraka ve zany sa ahoana marina ? Dia mba nomeny "micro" 50 segondra tao ikalamako ka dia io hitanareo io ny tavany.
Fa ankoatra lay fandraisana anjara - fandraisam-peo sy sary - dia nitantara ny tontoloandron'ny alahady niarahanay koa i Hery ao anatiny ao. Nahafinaritra satria ilay izy ny tena marina dia fihaonana tamin'i dadatoa sy nenitoa ary razokilahy, 38 taona aty aoriana. Mandalo mitsidika sy manao fialantsasatra eto Roma zareo. Hehy sy korana no nanafana ny latabatra, nitanisana ny lalao, ny ditra sy hagegena rehetra fahizany. Tsy ditra hoe inona akory fa ilay hoe nahatata-bava ray aman-dreny tamin'izany. Lavalava ihany ny fotoana niarahanay tamin'izany aloha e, telo trano nifanolo-bodirindrina izahay mpihavana ary nitovitovy taona ka zay trano tsy voakorontanay no nanenina, ny tabataba manginy fotsiny,... Fa teo koa rizareo lehibe tsy sasatry ny nifety, nifandimby nikarakara fa ny tena natetika aloha dia tao aminay.
Ah zalahy, tsy mety lany lay tamberina ato efa roa andro izao, satria isan-kariva dia miaraka misakafo ato antrano izahay mianakavy. Ary tsy maintsy manaiky ihany ny tenanay fa dia tsy hiova intsony raha atao ny kajy fa hay moa efa toa zao hatramin'ny fahakely
0 Hevitra | "Tamberin'ny fahazaza..."